Izindaba - Ungazikhetha Kanjani Ingcindezi Yamanzi
Ngokwanda kobunikazi bezimoto, nentengo yokuwashwa kwezimoto nayo inyukile. Iningi labanikazi bezimoto abasebasha bashintshe imibono yabo bakhetha ukuwasha izimoto zasekhaya ezishibhile, ezisheshayo, ezikahle, nezingakulungeli imvelo. Lapho ugeza imoto ekhaya, kuyadingeka futhi ukuthi ube nesibhamu esigeza amanzi. Lapho uthenga isibhamu samanzi esigeza imoto, ukubhekelwa komkhiqizo kubaluleke kakhulu. Ngakho-ke yisiphi isibhamu samanzi esigeza imoto engcono? Abanye abanikazi bezimoto bathenga isibhamu samanzi esinengcindezi ephezulu, kanti abanye abanikazi bezimoto bathenga umshini wokuwasha izimoto ophathekayo. Ake sibheke ukuthi ungasithenga kanjani isibhamu samanzi esishisayo sokuwasha izimoto zasendlini.
Lapho abantu besesha kumawebhusayithi ahlukahlukene okuthenga bathola ukuthi kunemikhiqizo eminingi yezibhamu zamanzi ezinengcindezi enkulu yokuwashwa kwezimoto zasekhaya, futhi umehluko wamanani nawo mkhulu kakhulu. Ezinye zibiza ama-yuan angama-20 kuye kwangama-30, kanti ezinye zibiza ama-yuan amabili kuya kwamakhulu amathathu. Ukuphendula imibuzo enjengokuthi "Yimuphi umkhiqizo wesibhamu samanzi acindezela kakhulu ukuwasha izimoto ulungile", sikuqoqele imininingwane ethile.
Isibhamu samanzi esigeza isibhamu samanzi yithuluzi lokuhlanza elisezingeni eliphezulu elenzelwe ikakhulukazi izimoto zomndeni, elinenzuzo yokonga amanzi, ingcindezi nokuvikelwa kwemvelo. Njengamanje, kunemikhiqizo eminingi yezibhamu zamanzi ezinengcindezi enkulu yokuwasha izimoto ezithengiswa ku-inthanethi, imikhiqizo enekhwalithi ethembekile ikakhulu ifaka uHuber, uTiger Knight, uGabriel no-Orichi.
Ubuhle bezibhamu zamanzi ezinengcindezi enkulu yokuwashwa kwezimoto zasendlini
Ukusetshenziswa okulula kuyinzuzo enkulu yesibhamu samanzi esinengcindezi enkulu yokuwasha izimoto zasendlini. Uma singekho isibhamu samanzi esinengcindezi enkulu yokuwashwa kwezimoto zasekhaya, ukuwashwa kwezimoto zethu kuzoba yinkinga enkulu. Ngaphandle kwesibhamu samanzi esishisayo sokuwashwa kwezimoto, singageza kuphela imoto ngebhakede lapho sigeza imoto. Kumele ukuthi lokhu kudiniwe kakhulu. Uma sinesibhamu samanzi, singayigwema le nkinga, ukuze songe amandla lapho sigeza imoto, futhi akudingeki sigijime ngebhakede. Ukuwasha izimoto ngesibhamu samanzi nakho kuhlanzekile, futhi kulula ukuhlanza imoto. Uma ugeza imoto ebhakedeni, amanzi akulula ukuwoma, futhi izingxenye zezimoto ziqedwa kalula ngamanzi.
2. Gcina Amanzi
Lapho ugeza imoto, amanzi asetshenziswa kakhulu. Uma sigeza imoto ngebhakede, imoto igezwa njengesikhukhula. Ngakho-ke ukonga amanzi kubaluleke kakhulu kithina. Abangane abaningi bezimoto bazothi abanendaba namanzi. Awunandaba kepha imoto yakho iyakhathala. Uma kunamanzi amaningi emzimbeni, angena kalula kwezinye izingxenye ezibucayi zemoto. Lapho siqala, kungenzeka kakhulu ukungasebenzi kahle. Amalambu emoto ayisibonelo esihle. Ezimweni eziningi, ukulimala kwamalambu emoto kudalwa amanzi angena kulesibani.
Ungasikhetha kanjani isibhamu samanzi esiphakeme?
Kulesi sigaba, into ebaluleke kakhulu ukuthenga isibhamu samanzi esinamandla kakhulu izinto zokwakha, ubungcweti nemininingwane, hhayi uphawu. Okulandelayo, sizokwabelana nawe ngesipiliyoni namakhono ekuthengeni izibhamu zamanzi ezinengcindezi yokuwasha izimoto zasendlini.
1.Bheka umlomo wombhobho wesibhamu samanzi esiphakeme.
Umlomo wombhobho wesibhamu samanzi onamandla awulula kangako, empeleni unolwazi impela. Ingxenye esengozini kakhulu yesibhamu samanzi esinengcindezi enkulu ngumbhobho. Kungcono ukhethe umbhobho owenziwe ngethusi.
2.Bheka i-hose yesibhamu samanzi esiphezulu.
Ipayipi lesibhamu samanzi esinengcindezi enkulu kumele limelane nengcindezi, amakhaza, ukushisa okuphezulu, ukugqwala nokuguga. Amathiphu: Ipayipi elicindezela kakhulu liphansi. Ngemuva kokugcwaliswa ngamanzi anomfutho ophakeme, azoqhuma kalula uma ecindezelwa amasondo, futhi azoguga kalula ngemuva kokusetshenziswa isikhathi eside. Kungcono ukhethe i-hose yokugeza izimoto eyenziwe nge-EVA noma i-PVC.
3.Bheka ingcindezi yamanzi yesibhamu samanzi esiphezulu.
Kuyaziwa ukuthi lapho uhlanza ngesibhamu samanzi esinengcindezi enkulu, ukuthi ukuhlanza kuhlanzekile kuncike kakhulu ekutheni ingcindezi yamanzi efuthwayo inamandla yini. Uma ingcindezi yamanzi efuthwe incane, izothinta kakhulu ijubane lokuhlanza futhi isibhamu samanzi esineqophelo eliphezulu singakhipha umfutho wamanzi onamandla, ukuze kufezekiswe inhloso yokususa amabala ezimoto ngokushesha nangokuphelele.
4.Bheka okubonakalayo kokusebenza kwesibhamu samanzi esiphakeme.
Ikhwalithi yezinto ezibonakalayo zesibhamu samanzi zithinta ngqo impilo yenkonzo yesibhamu samanzi esinezihibe. Isibhamu samanzi esisezingeni eliphakeme ngokuvamile sisebenzisa izinto zethusi zonke njengezinto zekhanda lesibhamu samanzi kanye nesixhumi esibonakalayo sepayipi lamanzi, kuyilapho indawo eshibhile yokuwasha izimoto ingcindezi yamanzi ivame ukwenziwa ngepulasitiki. Ukujwayela ukuvuza kwamanzi nokuqina okuqinile.
5.Qaphela isilinganiso sokudumisa kanye nevolumu yokuthengisa yezibhamu zamanzi ezinengcindezi ephezulu.
Uma umuntu ehlela ukuthenga izibhamu zamanzi ezinengcindezi enkulu noma ama-washer ezimoto online, angabheka ukuthengiswa nezilinganiso ezinhle zezibhamu zamanzi ezinengcindezi ephezulu. Izinga lokuthengisa nokudumisa lesibhamu samanzi esinengcindezi enkulu lapho kugezwa khona izimoto zasekhaya limele ngokwezinga elithile ukuthi le washer yemoto yaziwa kanjani ngabanikazi bezimoto.